Ubomi obuguqulwe baba bubomi kule mizobo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Las amagqabi afileyo alele kumphezulu wehlathi okanye ipaki banokuba zizinto ezifanelekileyo zesitayile esahlukileyo esifana nesinokusifumana ngesandla segcisa elibizwa ngokuba nguSusanna Bauer.
UBauer ubhala a imifanekiso eqingqiweyo yoqobo apho umbala omdaka wamagqabi awo omileyo uthatha yonke indima ekhokelayo ekusithabatheni kwinqanaba lobomi kubomi bobomi. Ubuqhophololo kunye nobumnandi buxubekile kulo msebenzi wobushushu obukhulu. La magqabi sele eza kuqhekezwa aqhekeze ubuninzi bamaqhekeza amancinci ukuze aphulukane nemilo yawo kwaye adluliselwe kulwakhiwo lomhlaba abakuwo.
UBauer uyakwazi ukuwagcina ngexesha lokusebenzisa iimilo zawo kuzo zonke iintlobo zeempawu kunye noqikelelo njengezinye zemifanekiso eqingqiweyo onokuthi uyibone kwabelwana ngayo apha. Ngumzobi ngokwakhe ofuna ibhalansi emsebenzini wakhe ukupeyinta umgca phakathi ubu ethe-ethe namandla. Uxinzelelo kunye nobumnandi kunxibelelwano lomntu yenye yeentsingiselo afuna ukuzenza nalo msebenzi ubalaseleyo.
Sebenzisa la magqabi omileyo ukuwajikeleza kwaye ziguqule zibe yimilo yegridi ngokungathi ngamagqabi omthi okanye ajikelezisa umfanekiso kolunye uhlobo lwamagqabi anobuhle obuphawuleka kakhulu, njengoko kunjalo kuloo mkrolo apho imibala emibini yomhlaba idibene kunye ukubonisa ukwakheka okuethe-ethe.
UBauer ufumana la maqhekeza amasebe, ezo Amagqabi abunile kunye naloo mizuzu mincinci ukusuka ebomini nangoku ukuza noluhlu lwemifanekiso eqingqiweyo eyenza umsebenzi omkhulu jikelele. Ukutsalela umnxeba kwintsingiselo yento engenabomi kodwa ungabuyela kuyo ngezandla nangomsebenzi walo mfanekiso ungalandela iwebhusayithi yakho. Unayo I-instagram yakhe y Facebook ukugcina usesikhathini kunye neeprojekthi ezintsha.
Siya kubhedu Kumzobo walo mzobi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Amagqabi awomileyo njengemifanekiso eqingqiweyo kaSusanna Bauer